Fandraisana feo ho an'ny iMovie miaraka amin'ny fakan-tsary amin'ny Internet sy mikrôfôna samihafa | Martech Zone
Ity dia iray amin'ireo lahatsoratra malaza indrindra eto Martech Zone satria ny orinasa sy ny olona dia manaparitaka paikadin'ny votoaty horonantsary hananganana fahefana an-tserasera ary hitondra any amin'ny orinasany. Na dia iMovie aza dia mety ho iray amin'ireo sehatra malaza indrindra amin'ny famoahana horonantsary noho ny fanamorana ny fampiasana azy, tsy iray amin'ireo sehatra fanovana horonantsary matanjaka indrindra izy io.
Ary, fantatsika rehetra fa ny fandraketana feo avy amin'ny fakantsary finday na webcam dia fanao mahatsiravina satria manangona karazana tabataba tsy ilaina rehetra. Ny fananana mikrô tsara dia hahafahana mampiavaka ny horonan-tsarinao. Ao amin'ny biraoko dia mampiasa an Audio-Technica AT2020 Cardioid Condenser Studio XLR Microphone mifandray amin'ny a Behringer XLR mankany amin'ny USB Pre-amp. Izy io dia mamoaka feo manankarena ary toa misy lavitra ny tabataba any am-boalohany.
Ho an'ny lahatsariko dia manana ny Logitech BRIO Ultra HD Webcam. Tsy vitan'ny hoe 4k no anoratana azy, fa misy fanitsiana taonina izay azo atao amin'ilay horonantsary mba hampifanaraka azy tsara amin'ny tontolo iainanao.
Tsy manohana Webcam sy loharano audio misaraka i iMovie!
Voafetra ihany ny iMovie - mamela anao hanoratra fotsiny avy amin'ny FaceTime miaraka amin'ny fakantsary fakan-tsarinao. Mbola ratsy kokoa aza, tsy afaka mandray feo amin'ny fitaovana audio hafa ianao… izay tena mahatsiravina tokoa.
Ecamm Live Virtual Camera dia manao!
Mampiasa rindrambaiko tsy mampino antsoina hoe Ecamm Live, it's tanteraka azo atao. Ny Ecamm Live dia ahafahanao mihodina a kamera virtoaly amin'ny OSX izay azonao ampiasaina avy eo ao anatin'ny iMovie ho loharano.
Afafazo Ecamm Live ary azonao atao ny manova ny toerana misy ny horonan-tsarinao, manampy ny overlay, ary mapanao ihany koa ny fitaovana fandraisam-peoo… amin'ity tranga ity, atodiko amin'ny alalàn'ny Behringer XLR ho an'ny USB izay ampifandraisin'ny mikrofonako Audio Technica.
Raha vantany vao manana ny horonan-tsarinao sy ny audio araka ny itiavanao azy ianao dia kitiho ny bokotra Import Video avy amin'ny fakan-tsary (zana-tsipika ambany) ao amin'ny iMovie:
Ary dia izay… izao dia azonao atao ny manoratra mivantana ny horonan-tsarinao ao amin'ny tetikasanao iMovie amin'ny fisafidianana ny Fakan-tsary Virtual Ecamm ho loharano!
Raha te ho matotra amin'ny horonantsarinao sy ny feonao ianao dia tsy maintsy ilaina ny Ecamm Live! Ny lafiny ratsy fotsiny dia ny nahitako ireo rindrambaiko sasany, toa ny Microsoft Teams, fa aza amantarana azy ho fakantsary… saingy mino aho fa olana Microsoft fa tsy olana Ecamm Live.
Vidio ny Ecamm Live Today!
Fampahafantarana: Mampiasako ireo rohy mpampifandray ahy amin'ny rindrambaiko sy rindrambaiko Ecamm Live mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: Webcam 4kpaomaaudio technicabehringerEcamm mivantanafacetimfacetimeiMovielogitech brioWebcam an'ny Logitech BRIOmikrôMicrosoftOSXfandraketana horonantsarymiketrona mikraobaxlrmikraoba xls
21 Jul 2021 amin'ny 11:15 PM
Misaotra nizara an'ity lahatsoratra mahatalanjona ity, Douglas! Azoko ampiasaina amin'ny rakipeo ho avy io. Talohan'izay dia mandray feo aho amin'ny alàlan'ny record-screen.com satria tsy fantatro izay fitaovana tsara indrindra handraisana horonantsary toy ny sarimihetsika sy amin'ny webcam. Ny zavatra ratsy dia tsy haiko ny mampiasa iMovie. Saingy misaotra anao aho, hanaraka ny baikonao aho. Misaotra betsaka!
Sep 4, 2021 amin'ny 1: 27 AM
Toa rindrambaiko tsara ny Ecamm, fa mampihomehy fotsiny ny vidiny. 16 dolara isam-bolana ho an'ny kinova mora vidy dia very saina fotsiny.
Sep 9, 2021 ao amin'ny 2: PM PM
Am-panajana, tsy manaiky aho ary mihevitra fa sarobidy lehibe io. Tena tsara ihany koa izy ireo amin'ny fihazonana ireo fanovana audio sy horonan-tsary rehetra amin'ny OSX. Ny 2 cents-ko fotsiny.